Home » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » 2017 #NABShow - နေ့ 1 အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2017 ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ NAB ပြရန် - နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆင့်အတိုင်းအတာပိတ်ထားသည် !!! တံခါးတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ကြပါပြီ - ဒါပေမယ့်ငါနှင့်ငါ့သမားတွေကျနော်တို့လုပ်နိုင်သည့် NAB သတင်းအားလုံးစုဆောင်း-up, setting, ပြီးသားနာရီဒီမှာပါပြီ!
သင်တို့အားငါဘယ်လောက်မပြောနိုင် NAB ပြရန် ငါ့ထံသို့ဆိုလိုတယ်! အစဉ်အမြဲငါကဒီမှာလာမယ့်ပါတယ်, ထိုသို့အမှန်တကယ်ငါ့ကိုတစ်စက္ကန့်နေအိမ်နဲ့တူပုံရသည်! လုပ်ဖို့ဒီတော့အများကြီး ... blogged-In နေပါ!
ဒါဟာ Las Vegas မှာနီဗားဒါးအတွက်ဒီနေရာမှာလှပတဲ့နေ့ကဖွင့်နဲ့ကျွန်မ NAB crowding နေကြသည်လူမည်မျှမယုံနိုငျ ပြီးသား! သင်တို့သည်ငါတို့၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုယုံကြည်နိုင်သလား ???
ကျနော်တို့ NABShow ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ, တွေ့တယ် 360 တိုက်ရိုက်စတူဒီယိုကနေအခုအချိန်မှာတိုက်ရိုက် streaming ကြသည်! Debra Kaufman အိုင်တီသတ်ဖြတ်ခြင်းနေပါသည်! သူမသည်အသံနဲ့အသံနှင့် S22 ပြဇာတ်ရုံအကြောင်းပြောနေတာရဲ့!
ဂျော့ခ်ျလူးကပ်သောအသံထုတ်လုပ်မှု၏ 50% ကပြောပါတယ်!
သင်ကစဉ်းစားတဲ့အခါ, ဒါမှန်သည်။ အကြောင်းအရာသည်ရှင်ဘုရင် IS, သူတို့ပိုင်ခွင့်ပါပဲ - ထိုသို့သော Netflix နှင့် Amazon ကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပေးပို့သည့်အချိန်များတွင် ပို. ပို. ရရှိနိုင်ဖြစ်လာနှင့်လူကသူတို့ကိုမြင်ချင်နေရာနေပါသည်!
မှာရိုင်ယန် pixel ပါဝါ Ciaran Doran, အလုပ်အမှုဆောင် VP ကို ​​Global Sales & Marketing နှင့်အတူတဲ။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်, ရှင်းလင်းမှုဂရစ်ဖစ်, သူတို့ရဲ့အယူဝါဒအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက် - ဂရပ်ဖစ်သူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်ဖြစ်ပြီး, သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အကွာအဝေး၏အဓိကဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားတစ်ခုတည်း, တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဘက်ပေါင်းစုံ system ထဲကနေတိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက်လိုအပ်ချက်များကိုအမှာစကားသောပြီးပြည့်စုံသောဂရပ်ဖစ်စနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတိုင်သိမ်းထား, CG setting- ကိုမဆိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် automated ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးပေးရန်လိုအပ်သမျှကို, Video Clips, အသံ, 2D နှင့် 3D DVE နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်း keyer ကယ်တင်တတ်၏။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသတင်း, အားကစား, စတူဒီယို, မိုဘိုင်း, အားကစားကွင်းနှင့်ဘာသာရေး applications များမှထွက်ရှိသောသင့်လျော်သည်။
တွမ် Lithgow, Bluefish444 မှာကုန်ပစ္စည်း Manager ဖြင့် Jaimi ။ သူတို့ဟာ၏ KRONOS အကွာအဝေးအကြောင်းပြောနေတာဖွင့် HD & SDI ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ I / O ကတ်များ။ အသစ်လိုင်းဒုတိယ Workflows နှုန်း 444K4ဘောင်မှတက်ကိုထောကျပံ့ပေးသော Bluefish60 ရဲ့ယုဂ်ကိုဗီဒီယိုကတ်များ၏အင်္ဂါရပ် set ကိုချဲ့ထွင်။ KRONOS လိုအပ်နောက်ထပ် Workflows များအတွက်တီထွင်နေသည် က Ultra HD IP ကိုကျော် 8K မှတက်, 120fps အထိမြင့်မားတဲ့ frame ကိုနှုန်းထားများမြင့်မား dynamic range ကိုနှင့်ဗီဒီယို။ KRONOS resolution ကို scale, ဗီဒီယိုက interlacing နှင့် de-interlacing အပါအဝင်ဗွီဒီယိုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာများဖြည့်စွက်, SDI ပြောင်းလဲခြင်းမှအိုင်ပီနှင့် IP မှဟာ့ဒ်ဝဲ codec ထောက်ခံမှု, SDI, နှင့် 12-bit မှာအရောင်အာကာသပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ယုဂ်၏အနိမ့်-အောင်းနေချိန်စွမ်းရည်ပူဇော်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ အမှန်ဆိုသည်ကားအံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်!
ရိုင်ယန်ဟယ်ရီဂလေဇာ, တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ SPROCKIT နှင့်အတူပြောနေတာ။ အကောင်းဆုံး-of-the-အကောင်းဆုံးစျေးကွက်-အဆင်သင့်မှမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်အဆင်သင့်ကစားပွဲ-ပြောင်းလဲနေတဲ့ - လောလောဆယ် SPROCKIT စျေးကွက်-အဆင်သင့်ကုမ္ပဏီများမှပြနေသည်၎င်း၏ပဉ္စမနှစ်တွင်ခံစား ဒါကြောင့်ရော့ခ်! သူတို့ဟာ stardom များအတွက်အလားအလာရှိသည်ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရွယ်တူများကစစ်ကြောစီရင်ပါပြီ။ SPROCKIT တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အထက်တန်းလွှာမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်လက်လှမ်းမီသည်။ အားလုံးအကောင့်များတွင် SPROCKIT ကရွေးချယ်တဲ့ startup status ကိုတစ်ဦးအခြို့သောအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် - သူတို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နီးပါး 100 ထွန်းသစ်ကုမ္ပဏီများအရာများစွာကိုအောင်မြင်သောရန်ပုံငွေကျည်, မိတ်ဖက်များနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများကြုံတွေ့ကြ SPROCKIT ပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဘယျအရာအခွင့်အလမ်း - တစ်ခုတည်းသော NAB မှာ! ရော့ခ်-on ဟယ်ရီ!
အင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ CTO ဖြစ်သူနှင့်အတူပေါ်ရိုင်ယန် NewTek။ ဒေါက်တာလက်ဝါးကပ်တိုင် "NDI ၏အဖ" အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းလူသိများသည် - သူစက်မှုလုပ်ငန်း-ချမှတ်အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကျိုးနွံဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်။ NDI ကိုယ်ထိလက်ရောက်အဆိုပါ SDI ဗီဒီယိုကို router သို့ပြင်ဆင်ရဲ့ဖွင့်အဘယျသို့အပေါငျးတို့သကွန်ရက်ကကိုကျော်ကနေလုံးဝအသစ်ကလမ်း-သုံးပြီးသတင်းရင်းမြစ်အတွက်ရှိုးပွဲများထုတ်လုပ်မှုခွင့်ပြု, မပြု။ NewTek NDI မည်သူမဆိုကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးကဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ရန်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်တဲ့မူပိုင်-အခမဲ့စံဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်, ဖမ်းစနစ်, မီဒီယာ Server-ဆိုသည့်အပေါ် NDI-enabled device ကိုတွေ့မြင်အပေါင်းတို့နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအနေဖြင့်လက်လှမ်းအကြောင်းအရာ, အရင်ကထက်ပိုပြီးသတင်းရင်းမြစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြုကွန်ရက်နိုင်ပါတယ်။ အံ့သြစရာရဲ့နည်းပညာ !!!
တိ Felstead, ဆမ်၏စျေးကွက်၏ဦးခေါင်း။ တိပု Quantel နှင့် Snell ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးစျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အတူနေရာချထားခြင်းနှင့် aligned ကြောင်းသေချာအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ "ကမ္ဘာပေါ်မှာအလျင်မြန်ဆုံးတိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုစနစ်က" အဖြစ်ဖော်ပြထားဆမ် (Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ) က၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကလာမယ့်မျိုးဆက်ထိန်းချုပ်မှု, Configuration နဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖြေရှင်းချက် Orbit ၏ပထမဦးဆုံး applications များသရုပ်ပြနေသည်။ ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း applications များ IP ကို ​​routing ကို configuration များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသည်မြင်ကွင်းစုံသင်္ဘော MV-800-၎င်းကိုလျှောက်လွှာနှင့် configuration tool များကိုနှင့်ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းမြေပုံကြည့်ရန် status ကိုအစီရင်ခံလျှောက်လွှာများပါဝင်သည်။ ဆမ်က၎င်း၏ကျန်ရှိနေသောထိန်းချုပ်မှုအားလုံးပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မည် - လာမည့်လအတွင်း Orbit သို့ - ထိုသို့သောလုပျခှငျနှင့် Live Runner အဖြစ်။
Nikki Randy Reck, MTIfilms မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူပြောတတ်ခြင်းနှင့် Cortex နေ့စဉ်ဆြေးြေိံး - post တွင်တိုင်းခြေလှမ်းအဘို့အရေးကိရိယာများနှင့်အတူပြည့်စုံလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်။ အရောင်, Sync ကို, Edit ကိုများနှင့်နောက်ခံ Transcoding ၏အဓိကနေ့စဉ်သတင်းစာများ features တွေလေ့လာသင်ယူရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ပင် tightest အချိန်ဇယားအပေါ်အများဆုံးထိရောက်မှုတို့အတွက်ညှိဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Cortex Manifest စက်နှင့်တည်နေရာများကိုဖြတ်ပြီးပြည့်စုံသစ္စာသေချာ။ မီဒီယာရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလမ်းတစ်လျှောက်ရှိသမျှခြေလှမ်းအောင်, ကနဦးဝန်လျှော့ပေးမှုအနေဖြင့် VFX နှင့်အသင်းတော်တို့အဘို့ဆွဲထုတ်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောလမ်းကိုခြေရာခံများနှင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုသည်။ Cortex ရဲ့အစွမ်းထက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် transcoding အင်ဂျင်ပြန်လည်သုံးသပ်, အထူးနှုန်းများ, VFX နှင့်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းမှပေးပို့ဘို့ကို formats များအတွက်အကျိုးရလဒ်များထုတ်လုပ်ဖို့နေ့စဉ်သတင်းစာများထက်ကျော်လွန်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဝိဒ်သည် Mowrey, ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Watson ဟာမီဒီယာဦးခေါင်း, IBM ကဗီဒီယိုကပိုပြီးအသိဉာဏ်အောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ IBM ကအများကြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာသူတို့ရဲ့ Watson ဟာ AI အပလက်ဖောင်းသုံးစွဲဖို့တစ်လမ်းထွက်နေသေးတယ်ထားပါတယ် - Watson ဟာ Discovery လျှင်မြန်စွာတစ်သိမြင်ရှာဖွေရေးနဲ့ content analytics အင်ဂျင်တည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ Watson ဟာ Discovery developer များလျင်မြန်စွာအသင်းများကိုဖြတ်ပြီးပိုကောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖွင့်, ဝှက်ထားသောပုံစံများနှင့်အဖြေကိုရှာတွေ့မှဒေတာသုံးစွဲကူညီပေးသည်နှင့် Watson, Conversation အင်ဂျင်နီယာများလျင်မြန်စွာ, စမ်းသပ်တည်ဆောက်နှင့်မိုဘိုင်း Device များအနှံ့ bot တွေဟာသို့မဟုတ်ကို virtual အေးဂျင့်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ရန်ခွင့်ပြုသည်, စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်း, ဒါမှမဟုတ်တောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုပ်အပေါ်ကိုဖန်တီးရန် သင့်ရဲ့ apps များနှင့်သုံးစွဲသူများအကြားကသဘာဝစကားစမြည်။ Watson ရဲ့ Virtual အေးဂျင့်, Watson ဟာအသိပညာစတူဒီယို - ဆွေးနွေးရန်လည်းအများအပြားရှုထောငျ့! အနာဂတ်မှာ Watson ဟာတွေနဲ့ကဒီမှာပါ!
Jaimi အသံနှင့်ဗီဒီယို၏ဆင့်ကဲနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကြောင်းကိုရှိမုန် Westland အရောင်း EMEA ၏ဒါရိုက်တာနှင့်အတူစကားပြော Blackmagic ဒီဇိုင်း ၎င်း၏ဖောက်သည်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မူလကများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဟောလိဝုဒ်'' s ကိုအထက်တန်းလွှာ colorists ကသင်သည်အခြား tools တွေနဲ့အတူရိုးရိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ကြောင်းပုံရိပ်တွေဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်သောကွောငျ့, DaVinci ဖြေရှင်းရန်အရာအားလုံးထက်ထက်ပိုပြီး feature ကိုရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ DaVinci 14 ဖြေရှင်းအယ်ဒီတာများအဘို့ features အသစ်ရာပေါင်းများစွာ, colorists နှင့်ယခုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, အသံပညာရှင်များရှိပါတယ်။ Colorists အော်တိုမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းအံ့သြဖွယ်အသစ်များကို filter များရှာဖွေလျင်မြန်စွာအသားအရေတန်ချိန်ချောမွေ့ဘို့ခြေရာခံ, မျက်လုံးတောက်ပ, နှုတ်ခမ်းအရောင်နဲ့ပိုပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့မည်! DaVinci ဖြေရှင်းရန်ဖန်တီးမှုနှင့်အွန်လိုင်းနှစ်ဦးစလုံးတည်းဖြတ်ရေးထိုသို့စုံလင်သောအောင်, မရရှိနိုင်နီးပါးတိုင်းစိတျကူးတည်းဖြတ်ရေးနှင့်ချုံ့ခြင်း tool ကိုလည်းပါဝင်သည်!
Maxon နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူရှင်ပေါလု Babb ရုပ်ရှင်ရုံ 4D သင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 3D အထုပ်ကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အဆင့်မြင့် 3D ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးသို့သော်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူမေးရိုး-ကျဆင်းနေဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးသေချာစေရန်တဲ့ professional အရောင်လိုအပ်ပါတယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ရုပ်ရှင်ရုံ 4D သင်လိုအပ်အရာဖြစ်တယ်။ အဲဒါကိုလေ့လာသင်ယူရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, features နဲ့ add-ons တွေကို၏ကျယ်ပြန့်-range ကိုအနုပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့အိပ်မက်သို့ဤလှည့်မသာ။ အသစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလိုလိုအလုပ်လုပ်နှင့်သုံးစွဲသူများကသူတို့ကိုတွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်ထားကြလိမ့်မည်ကိုအတိအကျဘယ်မှာလဲ - ထို 4D layout ကိုလည်းအလွယ်တကူတိကျစွာအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် fit မှစိတ်ကြိုက်နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုအတွက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - ရုပ်ရှင်ရုံ 4D စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းကန့်သတ်မထားဘူး - ဒါကြောင့်လည်း t ကိုဖွင့်အရမ်းဗိသုကာ & ဒီဇိုင်နာများ, သူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်! မည်သည့်အဆင့်တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သရုပ်မှန်လိုအပ်သည်ဘာမှ - ရုပ်ရှင်ရုံ 4D ကချွတ်ဆွဲထုတ်နိုငျပါသညျ!
ဘီလ် Thompson ကမှာသိုလှောင်ကုန်ပစ္စည်း Manager ကို EditShareမြောက်မြားစွာသောအရာတို့ကိုအကြောင်းကိုရိုင်ယန်ရန်, ဆွေးနွေးပွဲ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်ကိုမျှဝေရန်သိုလှောင်မှုနဲ့ tapeless အတွက်နည်းပညာကိုရှေ့ဆောင်, Post-ထုတ်လုပ်မှု, တီဗီ, နှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ EditShare'' s ကိုမြေပြင်ကိုချိုးဖောက်ထုတ်ကုန်ထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပူးပေါင်းလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသုံးပလက်ဖောင်းနေရာ (Windows / OS X ကို / Linux ကို) ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Non-linear ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်လျှောက်လွှာ - သူတို့ကဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ, high-performance ကိုဗဟိုက Shared သိမ်းဆည်းခြင်း, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထား software ကို, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Lightworks ပါဝင်သည်။ ဒါဟာ Las Vegas မှာအဆိုပါ NAB 2017 ဖြစ်ရပ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နောက်ဆုံးအသေးစိတ်ကိုင်ငွေလွှဲပြောင်းမှု၏ပိတ်ပွဲနှင့်အတူ, QC အထူးကု QUALES ဝယ်ယူရန်တစ်ဦးသီးသန့်နှင့် binding သဘောတူညီချက်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ Flow Pam ပလက်ဖောင်းမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ Dielectric ရဲ့ 75th နှစ်မြောက်ပဲ! သင်သိသည့်အတိုင်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအင်တင်နာ, RF စနစ်နှင့်ဓာတ်အားလိုင်းများကိုဆောင်ခဲ့သောသူဒဏ်ငွေရှေးရှေးများမှာ! ဒေါက်တာချားလ်စ် "Doc" ဘရောင်းရဲ့ Dielectric ထုတ်ကုန်ကော်ပိုရေးရှင်း 1942 အတွက်အစောပိုင်းစစ်အတွင်းရေဒါစနစ်များများအတွက်ဓာတ်အားလိုင်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲတော့တာပဲ။ စစ်ပွဲပြီးနောက် Doc ဘရောင်းရဲ့အဖွဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်၏ထွန်းသစ်စလယ်ကွင်းများအတွက်တီထွင်မှုသူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာအသုံးချနှင့် Dielectric မကြာမီသုံးခုစလုံးအဓိကရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များအဘို့ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ Dielectric ရှည်လျားထိပ်တန်း Tower မှ transmitter ကို output ကိုကနေပြီးပြည့်စုံသောမြင့်မားသောပါဝါစနစ်တွေကိုလူသိများခဲ့ပြီး, နှင့်လုံးဝနီးပါးအားလုံးအဓိကထုတ်လွှင့်နှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် !!!
ကောင်းပြီ, ထိုနေ့ရက်သည်တဦးတည်းဘို့ပါပဲ။ ဒါဟာထုပ်ပိုးပြီးပဲ! ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပျော်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ရှင်သမားတွေ, အပေါငျးတို့သအင်တာဗျူးတွေ, ရှိသမျှထုတ်ကုန်,! ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာဤမျှလောက်ပိုပြီးကြည့်ဖို့င် ... ပြီးတော့မနက်ဖြန်အခြားသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ (အထူးသဖြင့်, သင်သည် Erica!) ယနေ့သူတို့ရဲ့မဆုပ်မနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အသံလွှင့်ဘိန်ထမ်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်, ငါသည်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာ, အဆိုပါ Show ကိုဧည့်သည်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်! အခုတော့ - ရဲ့သူတို့ကိုပါတီများထိမှန်ပါစေ !!! နှင့်အညီ, နက်ဖြန်တိုင်အောင်, blogged-In နေဖို့သတိရ!
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2017 #NABShow ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit	2017-04-24
ယခင်: အဆိုပါဗီဒီယို Call Center စျေး BleepIT-The သာလျှင် Professional ကအဓမ္မနှောင့်နှေးနှင့် Facebook တိုက်ရိုက်နှင့်အခြားတိုက်ရိုက်လွှပလက်ဖောင်းများအဘို့အထူးဒီဇိုင်းဖယ်ရှားရေးစနစ်
နောက်တစ်ခု: ရိုးဗီဒီယိုနှင့်အတူ Symply မိတ်ဆက် SymplyULTRA Bundles: သတင်း NAB
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "2017 #NABShow - နေ့ 1 အသုတ်စုံ" ။ http://www.broadcastbeat.com/2017-nabshow-day-1-wrap-up/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။